Acquia: Gịnị bụ Ahịa Data Platform? | Martech Zone
Fraịde, Jenụwarị 10, 2020 Na Mọnde, Nọmba 10, 2020 Douglas Karr
Ka ndị ahịa na-ekwukọrịta ma mepụta azụmahịa na azụmaahịa gị taa, ọ na-esiwanye ike ijide echiche nke onye ahịa na ezigbo oge. Enwere m nzukọ n'ụtụtụ a na onye ahịa anyị nke na-enwe nsogbu ndị a. Onye na-ere ahịa email ha dị iche na ikpo okwu ozi mkpanaka ha na mpụga nke ebe nchekwa data ha. Ndị ahịa na-emekọrịta mana n'ihi na emeghị ka isi data ahụ mekọrịta, mgbe ụfọdụ, ọ na-ebute ma ọ bụ zigara ozi na data ọjọọ. Nke a na - ewepụta nnukwu mkpa maka ndị ọrụ na - ahụ maka ndị ahịa ha ma na - akpasu ndị ahịa ha iwe. Anyị na-enyere ha aka ịhazigharị usoro ihe eji eme ihe dị iche API nke ahụ ga-ejigide iguzosi ike n'ezi ihe data.
Nke ahụ bụ naanị ọwa ole na ole na-akpata nsogbu. Cheedị usoro ọtụtụ ebe na iguzosi ike n'ihe nke ndị ahịa, azụmahịa azụmahịa, mmekọrịta mmekọrịta ọha na eze, arịrịọ ndị ahịa, data ịgba ụgwọ, na mmekọrịta ekwentị. Gbakwunye na nkwekọrịta nke nzaghachi ahịa site na isi mmalite data ọwa mmiri… yikes. Nke a bụ ihe kpatara ya Ngwa data ndị ahịa agbanwewo ma na-enweta traction na oghere ụlọ ọrụ. Ndị CPD na-enyere ụlọ ọrụ aka itinye ọnụ ma depụta data sitere na narị ebe, nyochaa data, mepụta amụma dabere na data ahụ, ma soro ndị ahịa ha na-arụ ọrụ nke ọma. Ihu ọma, ọ bụ nlele ogo 360 nke ndị ahịa.
Kedu ihe bụ CDP?
Ebe nchekwa data ndị ahịa (CDP) bụ nchekwa data ndị ahịa ejikọtara ọnụ nke ndị ahịa na-ejikọ ọnụ ahịa ndị ahịa nke ụlọ ọrụ si ahịa, ọrịre na ọwa ọrụ iji mee ka ndị ahịa na -emepụta ihe ma na-anya ahụmịhe ndị ahịa. - Gartner, Hype Cycle maka Digital Marketing na Mgbasa Ozi
Dị ka Lọ Ọrụ CDP, Onye Ahịa Data Platform nwere ihe atọ dị oke egwu:
CDP bụ usoro jikwaa ahịa - a na-ewu ma na-achịkwa CDP site na ngalaba ahịa, ọ bụghị ngalaba ụlọ ọrụ teknụzụ Ozi. A ga-achọrọ ụfọdụ ọrụ teknụzụ iji melite ma jigide CDP, mana ọ chọghị ọkwa teknụzụ nke ọrụ ụlọ nkwakọba ihe data. Ihe dị mkpa bụ na ịzụ ahịa na-ahụ maka ikpebi ihe na-abanye na sistemụ yana ihe ọ na-ekpughe na sistemụ ndị ọzọ. Karịsịa, ọ pụtara na ahịa nwere ike ịme mgbanwe na-enweghị ịrịọ ikike onye ọ bụla, n'agbanyeghị na ọ nwere ike ịchọrọ enyemaka n'èzí.
CDP na-emepụta ebe nchekwa data ndị ahịa na-adịgide adịgide - CDP na-emepụta echiche zuru oke nke ndị ahịa ọ bụla site na ịwepụta data site na ọtụtụ usoro, na-ejikọ ozi metụtara otu onye ahịa ahụ, na ịchekwa ozi ahụ iji soro omume na oge. CDP nwere njirimara nkeonwe ejiri iji zụọ ozi ahịa ma soro nsonaazụ ahịa ọ bụla.
CDP na-eme ka data ahụ nweta usoro ndị ọzọ - enwere ike iji data nke echekwara na CDP site na sistemụ ndị ọzọ maka nyocha na ijikwa mmekọrịta ndị ahịa.
Acquia Ahịa Ahịa na Njikọ Aka
Ka ndị ahịa na-enwe mmetụta na-arịwanye elu site na ahụmịhe nke ndị ahịa niile, na-etinye data ndị ahịa ha gafee ọwa, gafee ntụpọ, yana n'ofe oge ndụ ndị ahịa ha na-aghọ ihe dị mkpa. Akwata bụ onye ndu na ụlọ ọrụ a na ya Ahịa Ndị Ahịa na Njikọ Aka enye:
Njikọ data - jikọta data gị niile, n'ụdị ọ bụla, site na isi data ọ bụla gafee ọwa dijitalụ na nke anụ ahụ nwere ihe karịrị 100 njikọta na API.
Ogo data - hazie, wepu, ma kenye njirimara dịka okike, ọdịdị ala, na mgbanwe nke adreesị maka ndị ahịa niile. Site na nha anya na nke nzuzu, AgilOne jikọtara ihe niile ndị ahịa na-eme na otu profaịlụ ndị ahịa ọbụlagodi na enwere naanị aha, adreesị, ma ọ bụ egwuregwu email. A na-emelite data ndị ahịa na-aga n'ihu ka ọ na-agụnye data kachasị ọhụrụ.
Ntinye amụma - nkuzi algorithms nke onwe-gi nke na-agwa AgilOne nchịkọta ma nyere gị aka ka gị na ndị ahịa na-emekọrịta ihe nke ọma. AgilOne na-enye ihe karịrị 400 si na igbe igbe nyocha akụkọ azụmaahịa na-enyere ndị ahịa aka ịmepụta ngwa ngwa ma kọwaa njirisi ọ bụla ha chọrọ maka ịkọ na ime ihe n'ime ngwa ahụ - na-enweghị koodu nzuzo.
Nkọwa aha ndị ahịa 360-Degree - wuo profaịlụ zuru oke nke onye ahịa gị, jikọtara data dị ka njem onye ọ bụla, ebe nrụọrụ weebụ na itinye aka na email, akụkọ azụmahịa azụmahịa niile gara aga, data igwe mmadụ, mmasị ngwaahịa na nkwenye, enwere ike ịzụta, yana ịkọ. nchịkọta, gụnyere omume ịzụta na ụyọkọ onye ahịa a bụ. Ihe profaịlụ ndị a na-egosi ebe ị ga-etinye ego, otu esi ahazi onwe gị, na otu esi eme ka ndị ahịa gị nwee obi ụtọ.
Ntinye data Omni-Channel - n’ime etiti etiti, ndị na - ere ahịa nwekwara ike imebe ma bido mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ekwentị mkpanaaka ya, ozi ya kpọmkwem, ebe a na - akpọ ya, ma chekwaa mkpọsa ngwa ngwa, ebe ị na - eme ndị na - ege ntị, ndụmọdụ, na wepụta data data ọ bụla, dị na ngwa ọ bụla n’ime usoro azụmahịa gị.
Orhazi ahaziri ahazi - ichikota ozi ahaziri iche, ọdịnaya, na mkpọsa gafee ọwa dijitalụ na nke anụ ahụ, na-enye ndị ahịa mgbatị olu mgbe ọ bụla ma ọ bụ ebe ndị ahịa na-eme. AgilOne na-enyekwa ndị na-ere ahịa ihe doro anya na ha na-ezigara onye ọ bụla ozi ziri ezi, ebe ọ bụ na AgilOne na-ahụ na ịhazigharị onwe ya dabere na otu nchekwa data ndị ahịa dị ọcha.
Tags: Ngozi 360agilonecpdahịa dataAhịa Data Platformahịa profaịlụnjikọ akaomni-ọwa